ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ အခက်အခဲဆုံး အဘိဝံသ စာမေးပွဲ ကို တနိုင်ငံလုံး ပထမဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင် ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် – Let Pan Daily
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ တရားတော် အားလုံးဖြစ်တဲ့ တိပိဋ ကစာမေးပွဲ(ပိဋကတ်သုံးပုံစာမေးပွဲ)သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်လေသည်။
(ပိဋကတ် သုံးပုံဆောင်ထားသည့် ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ကမ္ဘာ့မှတ်ဉာဏ် အကောင်းဆုံး ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ခဲ့လေသည်)
အဘိဝံသစာမေးပွဲ ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အခက်ခဲဆုံး စာမေးပွဲဖြစ်လေသည်အစိုးရစာမေးပွဲကဲ့သို့ မအောင်မချင်း ဖြေခွင့်မရှိဘဲ အသက်အားဖြင့် ကန့်သတ်ထားလို့ပါပဲ
စာသင်တန်းကို ၂ရနှစ်အတွင်း (တစ်လကျော်နေလျှင်ပင် ဖြေခွင့်မရတော့ပါ)စာချတန်း ကို အသက်(၃၀)အတွင်းအမှတ် (၁၀၀) တွင် (၈၅)မှတ်ရမှအောင်မြင်လေသည်။
(၈၅)မှတ်နဲ့အောင်တာ ပင် ရိုးရိုးအောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ် ထားတယ်။
ထို့ကဲ့သို့အရမ်း ခက်ခဲလှပါသော သကျသီဟ အဘိဝံသစာမေးပွဲကြီးတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ပထမဂုဏ်ထူးဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ပါသောမန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဓမ္မဝိနယရံသီကျောင်းဆရာတော်ဘုရား၏ တပည့်ရင်းဖြစ်သောအရှင်သောပါကာဘိဝံသ-အား ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပါသည်။
မစိုရိမ်တိုက်သစ်ကြီး၏ နာယကတစ်ပါးဖြစ်သွား သောအရှင်သောပါကာ ဘိဝံသ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး #ရွှေဘိုခရိုင် တန့်ဆည်မြို့ဇာတိဖြစ်ပြီ
ဆယ်တန်းကို (၃)ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ပြီးမှ သာသနာဘောင်သို့ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး ပညာသင်နှစ်(၁၀)နှစ်အတွင်း မစိုးရိမ်တိုက်သစ်နာယကအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားသော(ဆယ်တန်းအောင်စဉ် (၁၆)နှစ် ယခု(၂၆))နှစ်)
မိမိတို့နှင့် ဓမ္မဝိနယအဆောင်တွင် အတူနေခဲ့သော အရှင်သော ပါကာဘိဝံသ- အား ဂုဏ်ပြုပါ၏မစိုးရိမ်တိုက်သစ်အတွင်းမှာ တပည့်တွေ အဘိဝံသဘွဲ့ရ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်နာယကဖြစ်အောင် ပညာတွေသင်ကြားပေးပါသောဓမ္မဝိနယရံသီကျောင်းဆရာတော်အားလည်း ဦးခိုက်ပူဇော်ပါ၏ဘုရားအရှင်သောပါ ကာဘိဝံသသည် ယခုအခါ ဖားအောက်တောရ တွင် တရားအားထုတ်နေလေသည်သကျသီဟစာမေးပွဲဖြေပြီတိုင်း မော်လမြိုင် ဖားအောက်တောရသို့ အမြဲတရားလာထိုင်လေ့ရှိသော အရှင်တစ်ပါးဖြစ်လေသည်
ကမ္ဘာ့ဒုတိယအခက်ခဲဆုံးစာမေးပွဲတွင် ပထမဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သော အရှင်သောပါကာဘိဝံသအား ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပါသည်ဘုရား။
သကျသီဟဘိဝံသစာမေးပွဲ ပထမဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်မြင်တော်မူ၍ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် နာယကဖြစ်တော်မူသော ဦးသောပါကာဘိဝံသ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း…
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တန့်ဆည်မြို့နယ် ပေကုန်းရွာ ခမည်းတော် ဦးထွန်းကြိုင်+မယ်တော် ဒေါ်စန်းရွှင်တို့မှ ၁၃၅၄ ခု ၊ တပိုတွဲလဆန်း(၇)ရက် သောကြာနေ့တွင် ဖွားမြင်သော သားရတနာဖြစ်….
၁၃၇၄ ခုနှစ် တော်သလင်းလဆုတ်(၉)ရက်နေ့တွင် မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မဟာနာယကဆရာတော်ကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ဦးသိန်းဋ္ဌေး ဒေါ်ခင်ဝင်းဦးတို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟကို ခံယူကာ ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ…
၁။၁၃၇၀/၁၃၇၁ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း(အင်္ဂလိပ်၊ရူပ၊ဇီဝ)သုံးဘာသာဂုဏ်ထူး(2008 2009 ပညာသင်နှစ်)
၂။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဓမ္မာနုဂ္ဂဟ ငယ် လတ် ကြီး သုံးတန်းလုံးတို့၌ ပထမဂုဏ်ထူး
၃။ ဓမ္မာနုဂ္ဂဟ စာသင်တန်း.ပထမဂုဏ်ထူး
၄။၁၃၇၂ခု ပထမငယ်တန်း တနိုင်ငံလုံး ပထမ
၅။၁၃၇၃ခု ပထမလတ်တန်း တနိုင်ငံလုံး ပထမ
၆။၁၃၇၅ခု ပထမကြီးတန်း တနိုင်ငံလုံး ဒုတိယ
၇။၁၃ရရခုနှစ် မြင်းခြံ ပရိယတ္တိသဒ္ဓပါလစာသင်တန်း ဒုတိယဂုဏ်ထူး
၈။၁၃၇၈ခုနှစ် သကျသီဟစာသင်တန်း.တတိယ ဂုဏ်ထူး
၉။၁၃၇၉ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အစိုးရ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယဘွဲ့
၁၀။၁၃၈၀ ပြည့်နှစ် စေတိယင်္ဂဏ စာသင်တန်းအောင်မြင်
၁၁။၁၃၈၁ခုနှစ် သကျသီဟစာချတန်း အဘိဝံသစာမေးပွဲ ကို တနိုင်ငံလုံး ပထမဂုဏ်ထူး ဖြင့်အောင်မြင်၍ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် အငယ်ဆုံး နာယကတပါးဖြစ်တော်မူသည်…သက်တော် ၂၆နှစ်သာရှိတော်မူ..
ယခုအခါ မစိုးရိမ် တိုက်သစ် ဓမ္မဝိနယရံသီကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်လျှက် ရှိပါသည်…
ဆရာသမားဂုဏ်ကို အာရုံပြုလျှက် ဖော်ပြပါသည်ဘုရား..
ကမ်ဘာ့ ဒုတိယ အခကျအခဲဆုံး အဘိဝံသ စာမေးပှဲ ကို တနိုငျငံလုံး ပထမဖွငျ့ ထူးခြှနျစှာ အောငျမွငျ ခဲ့တဲ့ ဆရာတျော
မွတျစှာဘုရားဟောကွားထားတဲ့ တရားတျော အားလုံးဖွဈတဲ့ တိပိဋ ကစာမေးပှဲ(ပိဋကတျသုံးပုံစာမေးပှဲ)သညျ ကမ္ဘာပျေါတှငျ အခကျခဲဆုံးဖွဈလသေညျ။
(ပိဋကတျ သုံးပုံဆောငျထားသညျ့ ကြေးဇူးတျောရှငျ မငျးကှနျးတိပိဋကဆရာတျောဘုရားကွီးသညျ ကမ္ဘာ့မှတျဉာဏျ အကောငျးဆုံး ဂငျးနဈစံခြိနျဝငျခဲ့လသေညျ)
အဘိဝံသစာမေးပှဲ ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အခကျခဲဆုံး စာမေးပှဲဖွဈလသေညျအစိုးရစာမေးပှဲကဲ့သို့ မအောငျမခငျြး ဖွခှေငျ့မရှိဘဲ အသကျအားဖွငျ့ ကနျ့သတျထားလို့ပါပဲ
စာသငျတနျးကို ၂ရနှဈအတှငျး (တဈလကြျောနလြှေငျပငျ ဖွခှေငျ့မရတော့ပါ)စာခတြနျး ကို အသကျ(၃၀)အတှငျးအမှတျ (၁၀၀) တှငျ (၈၅)မှတျရမှအောငျမွငျလသေညျ။
(၈၅)မှတျနဲ့အောငျတာ ပငျ ရိုးရိုးအောငျအဆငျ့ဟု သတျမှတျ ထားတယျ။
ထို့ကဲ့သို့အရမျး ခကျခဲလှပါသော သကသြီဟ အဘိဝံသစာမေးပှဲကွီးတှငျ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံး ပထမဂုဏျထူးဖွငျ့ ထူးခြှနျစှာ အောငျမွငျခဲ့ပါသောမန်တလေးမွို့ မစိုးရိမျတိုကျသဈ ဓမ်မဝိနယရံသီကြောငျးဆရာတျောဘုရား၏ တပညျ့ရငျးဖွဈသောအရှငျသောပါကာဘိဝံသ-အား ဂုဏျပွုပူဇျောပါသညျ။
မစိုရိမျတိုကျသဈကွီး၏ နာယကတဈပါးဖွဈသှား သောအရှငျသောပါကာ ဘိဝံသ သညျ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး #ရှဘေိုခရိုငျ တနျ့ဆညျမွို့ဇာတိဖွဈပွီ
ဆယျတနျးကို (၃)ဘာသာဂုဏျထူးဖွငျ့ အောငျမွငျပွီးမှ သာသနာဘောငျသို့ဝငျရောကျလာသူဖွဈပွီး ပညာသငျနှဈ(၁၀)နှဈအတှငျး မစိုးရိမျတိုကျသဈနာယကအဖွဈသို့ရောကျရှိသှားသော(ဆယျတနျးအောငျစဉျ (၁၆)နှဈ ယခု(၂၆))နှဈ)
မိမိတို့နှငျ့ ဓမ်မဝိနယအဆောငျတှငျ အတူနခေဲ့သော အရှငျသော ပါကာဘိဝံသ- အား ဂုဏျပွုပါ၏မစိုးရိမျတိုကျသဈအတှငျးမှာ တပညျ့တှေ အဘိဝံသဘှဲ့ရ မစိုးရိမျတိုကျသဈနာယကဖွဈအောငျ ပညာတှသေငျကွားပေးပါသောဓမ်မဝိနယရံသီကြောငျးဆရာတျောအားလညျး ဦးခိုကျပူဇျောပါ၏ဘုရားအရှငျသောပါ ကာဘိဝံသသညျ ယခုအခါ ဖားအောကျတောရ တှငျ တရားအားထုတျနလေသေညျသကသြီဟစာမေးပှဲဖွပွေီတိုငျး မျောလမွိုငျ ဖားအောကျတောရသို့ အမွဲတရားလာထိုငျလရှေိ့သော အရှငျတဈပါးဖွဈလသေညျ
ကမ္ဘာ့ဒုတိယအခကျခဲဆုံးစာမေးပှဲတှငျ ပထမဂုဏျထူးဖွငျ့ အောငျမွငျသော အရှငျသောပါကာဘိဝံသအား ဂုဏျပွုပူဇျောပါသညျဘုရား။
သကသြီဟဘိဝံသစာမေးပှဲ ပထမဂုဏျထူးဖွငျ့အောငျမွငျတျောမူ၍ မစိုးရိမျတိုကျသဈ နာယကဖွဈတျောမူသော ဦးသောပါကာဘိဝံသ၏ ထရေုပ်ပတ်တိအကဉျြး…
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး တနျ့ဆညျမွို့နယျ ပကေုနျးရှာ ခမညျးတျော ဦးထှနျးကွိုငျ+မယျတျော ဒျေါစနျးရှငျတို့မှ ၁၃၅၄ ခု ၊ တပိုတှဲလဆနျး(၇)ရကျ သောကွာနတှေ့ငျ ဖှားမွငျသော သားရတနာဖွဈ….
၁၃၇၄ ခုနှဈ တျောသလငျးလဆုတျ(၉)ရကျနတှေ့ငျ မစိုးရိမျတိုကျသဈ မဟာနာယကဆရာတျောကို ဥပဇ်ြစာယျပွု၍ ဦးသိနျးဋ်ဌေး ဒျေါခငျဝငျးဦးတို့၏ ပစ်စယာနုဂ်ဂဟကို ခံယူကာ ရဟနျးအဖွဈသို့ ရောကျရှိ…
၁။၁၃၇၀/၁၃၇၁ ခုနှဈတက်ကသိုလျဝငျတနျး(အင်ျဂလိပျ၊ရူပ၊ဇီဝ)သုံးဘာသာဂုဏျထူး(2008 2009 ပညာသငျနှဈ)
၂။ မစိုးရိမျတိုကျသဈ ဓမ်မာနုဂ်ဂဟ ငယျ လတျ ကွီး သုံးတနျးလုံးတို့၌ ပထမဂုဏျထူး
၃။ ဓမ်မာနုဂ်ဂဟ စာသငျတနျး.ပထမဂုဏျထူး
၄။၁၃၇၂ခု ပထမငယျတနျး တနိုငျငံလုံး ပထမ
၅။၁၃၇၃ခု ပထမလတျတနျး တနိုငျငံလုံး ပထမ
၆။၁၃၇၅ခု ပထမကွီးတနျး တနိုငျငံလုံး ဒုတိယ
၇။၁၃ရရခုနှဈ မွငျးခွံ ပရိယတ်တိသဒ်ဓပါလစာသငျတနျး ဒုတိယဂုဏျထူး
၈။၁၃၇၈ခုနှဈ သကသြီဟစာသငျတနျး.တတိယ ဂုဏျထူး
၉။၁၃၇၉ ခုနှဈ နိုငျငံတျောအစိုးရ သာသနဓဇဓမ်မာစရိယဘှဲ့
၁၀။၁၃၈၀ ပွညျ့နှဈ စတေိယင်ျဂဏ စာသငျတနျးအောငျမွငျ
၁၁။၁၃၈၁ခုနှဈ သကသြီဟစာခတြနျး အဘိဝံသစာမေးပှဲ ကို တနိုငျငံလုံး ပထမဂုဏျထူး ဖွငျ့အောငျမွငျ၍ မစိုးရိမျတိုကျသဈ အငယျဆုံး နာယကတပါးဖွဈတျောမူသညျ…သကျတျော ၂၆နှဈသာရှိတျောမူ..
ယခုအခါ မစိုးရိမျ တိုကျသဈ ဓမ်မဝိနယရံသီကြောငျးတှငျ သီတငျးသုံးနထေိုငျလြှကျ ရှိပါသညျ…
ဆရာသမားဂုဏျကို အာရုံပွုလြှကျ ဖျောပွပါသညျဘုရား..
ကိုဗစ်ပုံစံသစ် နဲ့ စာသင်ရတဲ့ အတွက် ကျောင်းသားတွေ မှာ အခက်အခဲ ရှိနေဟု အတိုင်ပင်ခံဆို